Kleptomania (မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » စိတ်ကျန်းမာရေး » Kleptomania (မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါ)
Kleptomania (မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါ) ကဘာလဲ။
မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါဆိုတာယေဘုယျအားဖြင့် ကိုယ့်မှာလိုအပ်တဲ့အရာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ တန်ဖိုးနည်းပစ္စည်းလေးတွေကိုခိုးချင်တဲ့စိတ်ကိုထိန်းလို့မရတာထိန်းပေမယ့်ခဏခဏပြန်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိတာကိုခေါ်တာပါ။ ဒီရောဂါကတော်တော့်ကိုအခြေအနေဆိုးတဲ့ စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးပါပဲမကုသပဲထားခဲ့ပါကသင်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဒဏ်ရာရနိုင်ပြီးကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်။
Kleptomania (မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
-စိတ်ဖိစီးမှုများလာတာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာတွေ စိတ်ပါလာတဲ့ခံစားချက်တွေကြောင့် ခိုးယူခြင်းကိုဖြစ်သွားစေတာမျိုး။
ဟုတ်ကဲ့။ ရှိပါတယ်။ အောက်မှာပြောပြမယ့်အချက်တွေ လက္ခဏာတွေကမခိုးရမနေနိုင်ရောဂါရှိသူတွေမှာရှိတတ်ပါတယ်။
-တစ်ခြားခါးပိုက်နှိုက်သူခိုးတွေနဲ့မတူပဲမခိုးရမနေနိုင်ရောဂါရှိသူများဟာကိုယ်ကျိုးရဖို့အတွက်ခိုးတာစမ်းချင်လို့ခိုးတာ ပုန်ကန်လိုစိတ်နဲ့ခိုးတာမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ခိုးချင်တဲ့စိတ်ကိုမတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အတွက် ရိုးရိုးခိုးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
-အဲ့လိုရောဂါသည်တော်တော်များများဟာစတိုးဆိုင်တွေ စူပါမားကတ်တွေ အများသူငှာတွေရှိတဲ့နေရာတွေကနေခိုးတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆီကနေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီကနေပါတီလိုနေရာမျိုးတွေကနေခိုးကြပါတယ်။
-ခိုးလိုက်တဲ့ပစစည်းတွေဟာမခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါရှိတဲ့လူတွေအတွက် ဘာတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့ပစစည်းတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဝယ်နိုင်နေတဲ့ပစစည်းတွေပဲဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
-အခိုးခံရတဲ့ပစစည်းတွေကိုများသောအားဖြင့်ပစ်ထားတတ်ကြတယ် ဘယ်တော့မှလည်းမသုံးဖြစ်ကြပါဘူး။ တစ်ချို့ကလှုလိုက်တာမျိုး၊သူငယ်ချင်းတို့ မိသားစုဝင်တို့ကိုပေးလိုက်တာမျိုး တစ်ချို့ဆိုရင်သူတို့ခိုးတဲ့နေရာဆီကိုတိတ်တိတ်လေးပြန်သွားထားတတ်ကြပါတယ်။
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေ လက္ခဏာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆေးပညာဆိုင်ရာအကြံပေးဆွေးနွေးမှုကိုသင်ရယူသင့်ပါပြီ။ ကုသမှုခံယူမှသာ သင့်ရဲ့မခိုးရမနေနိုင်သောစိတ်ကိုထိန်းချုပ်လို့ရလာမှာပါ။ မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါရှိတဲ့လူအများစုက ကုသမှုကိုမခံယူချင်ကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကိုဖမ်းလိုက်မလားထောင်ချလိုက်မလားဆိုပြီးကြောက်ကြလို့ပါ။ သို့သော်လည်း သင့်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့လူတွေကသင့်ရဲ့ခိုးမှုကို အာဏာရှိသူတွေဆီကိုတိုင်ကြားလေ့မရှိပါဘူး။
Kleptomania (မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါကိုဘာကဖြစ်စေလဲသေချာမသိကြပါဘူး။ သီအိုရီတွေကတော့ ဦးနှောက်မှာပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာတွေဖြစ်တာကြောင့် မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Kleptomania (မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါကိုသိပ်ပြီးမတွေ့ရတတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က ရောဂါကုသမှုကိုမခံယူတတ်ကြပါဘူးတစ်ချို့ကလည်းခဏခဏ ခိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါတည်းအချုပ်ထဲရောက်သွားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါကိုအဖြေရှာနာမည်မတပ်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြရပါတယ်။ မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေမှာဖြစ်တတ်ပြီး ကြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်ချိန်တွေမှာပိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ အသက်ကြီးမှတွေ့ရတတ်တာလည်းရှိပါတယ်။
မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချက်တွေကတော့–
မိသားစုနောက်ကြောင်းရာဇဝင်-မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါ ကိုမိသားစုဝင်တွေထဲမှာရှိခဲ့ရင် ဥပမာမိဘတွေ မောင်နှမတွေမှာရှိခဲ့ရင်၊စိတ်စွဲလန်းမှုရောဂါအခြေအနေတွေရှိခဲ့ရင်၊အရက်သေစာသောက်စားခြင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းများရှိခဲ့ရင် မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။
Kleptomania (မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ဆီမှာမခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါရှိနေပြီလို့ယူဆပြီးကုသမှုခံယူမယ်လို့စဉ်းစားတာနဲ့ သင့်ဆီမှာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေရှိနေပြီးဖြစ်လောက်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတွေပြ ုလုပ်တာနဲ့သင့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို လှုံဆော်စေတဲ့ ရောဂါ အခံတွေရှိမရှိသိရှိနိုင်ပါတယ်။
American Psychiatric Association ကနေထုတ်ဝေတဲ့ Diagnostics and statistical manual of mental disorder (DSM 5)
ပါအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေကစိတ်ရောဂါတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုအခြေရှာနာမည် ွတပ်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီးအသက်အာမခံကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ဆီမှာအသက်အာမခံထားတဲ့သူတွေရဲ့ ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးကြပါတယ်။
အောက်မှာပြောပြမယ့်အချက်တွေက (DSM-5) ထဲမှာပါတဲ့မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါရှင်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အချက်များဖြစ်ပါတယ်။
Kleptomania (မခိုးရမနေနိုင်သောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မခိုးရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါကိုမိမိဘာသာကျော်လွှားဖြတ်သန်းဖို့ရာကတော့ တော်တော်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ ကုသမှုခံယူခြင်းမရှိခဲ့ပါကမခိုးရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါဟာတအားကိုရှည်ကြာသွားနိုင်ပါတယ်။
မခိုးရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါကိုကုသခြင်းမှာဆေးပေးပြီးကုသခြင်း၊စိတ်ကိုကုသပေးခြင်း၊တစ်ခါတစ်လေတော့ အဲ့လိုရောဂါရှင်တွေစုထားတဲ့ အုပ်စုလေးတွေမှာစကားပြောပေးခြင်းနဲ့ကုလို့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း မခိုးရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါကိုဘယ်ဟာနဲ့တော့အကောင်းဆုံးထားပြီးကုလို့ရပါတယ်လို့မရှိသေးပါဘူးစစ်တမ်းကောက်ယူသူတွေကတော့ ဘယ်အရာနဲ့ကုရင်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာသိဖို့ကြိုးစားနေကြတုန်းပါပဲ။
သင့်အနေနဲ့လည်း သင့်အတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မယ့် ကုသမှုမျိုးစုံကို ကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကုသမှုကိုသေချာစွာခံယူပါ။ ဆေးသောက်ပါဆိုရင်သေချာသောက်ပြီးသူတို့ရဲ့အချိန်ဇယားအတိုင်းချိန်းတဲ့ အချိန်တိုင်းတက်ရောက်ပေးပါ။
မခိုးရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါအကြောင်းကိုသေချာသိအောင်လုပ်ပါဒါမှသင်က အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေ၊ဖြစ်လာနိုင်စေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ။ ကုသမှုအကြောင်းအရှာုတွေကိုသင်သေချာနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ခိုးချင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ ခံစားချက်တွေ၊အတွေးတွေ၊အခြေအနေတွေကို ဖော်ထုတ်ပါ အဲ့ဒါမှပဲ သင်ကထိုအချက်တွေကိုလိုက်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်နိုင်မှာမို့ပါ။
ဆေးသုံးစွဲခြင်းနဲ့ တစ်ခြားစိတ်ရောဂါပြသနာများရှိခဲ့ပါက ကုသမှုခံယူပါ။
သင့်ရဲ့ခိုးချင်တဲ့စိတ် ခါးပိုက်နှိုက်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ခြင်း တစ်ခြားအပန်းဖြေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ကြည့်ပါ။
တရားမှတ်ခြင်း၊ယောဂဆော့ခြင်း၊ထိုက်ချိ ဆော့ကစားခြင်းတို့နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားပါ။
တစ်ကယ်လို့သင်ချစ်ခင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ကမခိုးရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါအနေနဲ့ ကုသမှုခံယူနေရတယ်ဆိုရင် သင်ကသူတို့ရဲ့ကုသတဲ့ အစီအစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်နားလည်သိရှိအောင်လုပ်ပါ ပြီးတော့သူတို့အောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်တာကိုအားပေး ပါ။ သင်ချစ်ခင်ရတဲ့လူရဲ့ ကုသမှုအတန်းတွေကိုကူညီပြီးလိုက်တက်ပေးခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကိုဘာတွေကခိုးချင်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေသလဲဘာတွေနဲ့ မခိုးချင်အောင်လုပ်နိုင်မလဲတားနိုင်မလဲဆိုတာတွေသိရတော့ ပိုပြီးအကုူအညီရနိုင်ပါတယ်။
မခိုးရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါကိုဘယ်အရာကဖြစ်စေလဲဆိုတာသေချာမသိတာကြောင့် ဘာတွေနဲ့တားရမလဲဆိုတာလဲရေရေရာရာ ပြောလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ မခိုးရမနေနိုင်ဖြစ်လာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ကုသမှုခံယူလိုက်မယ်ဆိုရင် မခိုးရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်တဲ့အထိမရောက်နိုင်ပဲ ၎င်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေ ဆိုးဝါးတဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းတားပေးနိုင်မှာပါ။
(တကယ်လို့သင့်မှာမေးစရာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ဘယ်ဟာကသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာသိနိုင်အောင်လုပ်ပါ။)
1. Kleptomania. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kleptomania/basics/definition/con-20033010. Accessed November 11, 2014.